မိန်းကလေးတွေတကယ်လိုအပ်တဲ့Relationshipမျိုးဆိုတာ | Buzzy
ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ မည်သူမှမပြည့်စုံကြပါဘူး။ဒါပေမယ့်လည်း အချစ်နဲ့တွေ့ကြတဲ့ အခါမှာတော့ မိမိရဲ့ချစ်သူဟာ ကောင်းတယ်၊ ချောတယ် ၊လှတယ်၊ တကယ့်လက်တွဲဖော်အမှန်ကို တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ ထင်နေတက်ကြပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ သူဟာ တကယ်ကော ကောင်းတဲ့သူလားဆိုတာကို စတင်ပြီးတော့ သံသယတွေဝင်လာကြပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလိုသံသယ၀င်တိုင်း အဖြေရှာမရခဲ့ရင် မည်သည့်နည်းလမ်းတွေနဲ့ အဖြေရှာနိုင်သလည်းဆိုတာကတော့..
ဒီကမ်ဘာလောကကွီးမှာ မညျသူမှမပွညျ့စုံကွပါဘူး။ဒါပမေယျ့လညျး အခဈြနဲ့တှကွေ့တဲ့ အခါမှာတော့ မိမိရဲ့ခဈြသူဟာ ကောငျးတယျ၊ ခြောတယျ ၊လှတယျ၊ တကယျ့လကျတှဲဖျောအမှနျကို တှပွေီ့ဆိုပွီးတော့ ထငျနတေကျကွပါတယျ။ ပွီးတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယျရှေးခယျြခဲ့တဲ့ သူဟာ တကယျကော ကောငျးတဲ့သူလားဆိုတာကို စတငျပွီးတော့ သံသယတှဝေငျလာကွပါလိမျ့မယျ။ အဲ့ဒီလိုသံသယဝငျတိုငျး အဖွရှောမရခဲ့ရငျ မညျသညျ့နညျးလမျးတှနေဲ့ အဖွရှောနိုငျသလညျးဆိုတာကတော့..
(၁) သူကဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးကိုမဆို မကြောက်ဘဲနဲ့ ပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းဖို့အဆင်သင့်ပါဘဲ။
Photo : The Rock (Instagram)
တကယ့်ယောက်ကျားကောင်းတစ်ယောက်က စကားလုံးလှလှလေးတွေကိုပြောတက်ယုံတင်မဟုတ်ဘဲ တကယ်လက်တွေ့လည်း ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ အရမ်းခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတောင် သင်ငိုစရာများရှိနေရင် သူရဲ့ပုခုံးက အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ပါဘဲ။
တကယျ့ယောကျကြားကောငျးတဈယောကျက စကားလုံးလှလှလေးတှကေိုပွောတကျယုံတငျမဟုတျဘဲ တကယျလကျတှလေ့ညျး ပွုလုပျပေးပါတယျ။ အရမျးခကျခဲတဲ့အခွအေနမြေိုးမှာတောငျ သငျငိုစရာမြားရှိနရေငျ သူရဲ့ပုခုံးက အမွဲတမျးအဆငျသငျ့ပါဘဲ။
(၂) သူ့ဘာသာသူလည်း ချက်စားနိုင်တယ်။
အခုခေတ်အမျိုးသမီးတော်တော်များများက ယောက်ကျားပီသတဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့ ချက်နည်းပြုတ်နည်း တက်တဲ့ယောက်ကျားတွေ ကို ရွေးချယ်ကြတာများပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ယောက်ကျားလေး တစ်ယောက်ချက် ဖို့ပြုတ်ဖို့ ဆိုရင်ထွေထွေထူးထူးဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ခေါက်ဆွဲပြုတ်တစ်ထုပ်ရှိရင်တောင် ပြုတ်စားတက်တဲ့ယောက်ကျားတွေ က မိန်းကလေးတွေကို ပိုပြီး ပျော်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့။
အခုခတျေအမြိုးသမီးတျောတျောမြားမြားက ယောကျကြားပီသတဲ့အမြိုးသားတှနေဲ့ ခကျြနညျးပွုတျနညျး တကျတဲ့ယောကျကြားတှေ ကို ရှေးခယျြကွတာမြားပါတယျ။ ပွီးတော့လညျး ယောကျကြားလေး တဈယောကျခကျြ ဖို့ပွုတျဖို့ ဆိုရငျထှထှေထေူးထူးဘာမှမလိုအပျပါဘူး။ မီးဖိုခြောငျထဲမှာ ခေါကျဆှဲပွုတျတဈထုပျရှိရငျတောငျ ပွုတျစားတကျတဲ့ယောကျကြားတှေ က မိနျးကလေးတှကေို ပိုပွီး ပြျောစနေိုငျပါတယျတဲ့။
(၃) သင်အမှားအကြီးကြီးကျူးလွန်မိရင်တောင်မှ အမြဲခွင့်လွှတ်ပေးမယ်နိုင်တယ်။
Photo : Megan Fox (Instagram)
လူတိုင်းအမှားနဲ့မကင်းပါဖူး။ သင်အမှားလုပ်ပြီးတိုင်း တခြားသူတွေက ဆန့်ကျင်ဘက်နေရာမှာရှိနေရင်တောင် သင့်ရဲ့ချစ်သူအမျိုးသားက အပြစ်တင်ပြောဆိုမနေဘဲ အမြဲတမ်း သင့်ဘက်ကရပ်တည်နေပါလိမ့်မယ်။
လူတိုငျးအမှားနဲ့မကငျးပါဖူး။ သငျအမှားလုပျပွီးတိုငျး တခွားသူတှကေ ဆနျ့ကငျြဘကျနရောမှာရှိနရေငျတောငျ သငျ့ရဲ့ခဈြသူအမြိုးသားက အပွဈတငျပွောဆိုမနဘေဲ အမွဲတမျး သငျ့ဘကျကရပျတညျနပေါလိမျ့မယျ။
(၄) အမှတ်တရ သေးသေးလေးတွေကအစ သူအမြဲဂရုတစိုက်နဲ့သိမ်းထားတယ်။
Photo : celebrity(Instagram)
အခုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်က သင့်ရဲ့ချစ်သူခင်ပွန်းက သင်ဘယ်နေ့မှာဘာဝတ်လာတယ်ဆိုတာများကို အမြဲထိုင်မှတ်နေ တာမျိုးကိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဖူး။ ဒါပေမယ့် သင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ သူအမြဲတမ်း မှတ်ထားပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ သင်ကော်ဖီ သောက်ရင် သကြားဘယ်နှစ်ဇွန်းလောက် ထည့်သောက်သလည်း ဆိုတာမျိုးပေါ့။
အခုပွောတဲ့အဓိပ်ပာယျက သငျ့ရဲ့ခဈြသူခငျပှနျးက သငျဘယျနမှေ့ာဘာဝတျလာတယျဆိုတာမြားကို အမွဲထိုငျမှတျနေ တာမြိုးကိုဆိုလိုခငျြတာမဟုတျပါဖူး။ ဒါပမေယျ့ သငျနဲ့ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေိုတော့ သူအမွဲတမျး မှတျထားပါလိမျ့မယျ။ ဥပမာ သငျကျောဖီ သောကျရငျ သကွားဘယျနှဈဇှနျးလောကျ ထညျ့သောကျသလညျး ဆိုတာမြိုးပေါ့။
(၅) စမတ်မကျရင်တောင်မှ ပညာတော့ရှိပါတယ်။
Photo : Kimkardashian(Instagram)
ဘေးနားက ရူပဗေဒသဘောတရားတွေကိုအကျယ်တ၀င့်ရှင်းပြနေတဲ့လူထက် ဘ၀ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ အဖြေထုတ်နေတဲ့သူကပိုပြီးတော့ သင့်တော်ပါတယ်။ သင့်အမေနဲ့ သင်စကားများလာတဲ့အခါ ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံလေးတွေပေးမယ့်သူ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ကံကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
ဘေးနားက ရူပဗဒေသဘောတရားတှကေိုအကယျြတဝငျ့ရှငျးပွနတေဲ့လူထကျ ဘဝရဲ့ပွဿနာတှကေိုဖွရှေငျးဖို့ အဖွထေုတျနတေဲ့သူကပိုပွီးတော့ သငျ့တျောပါတယျ။ သငျ့အမနေဲ့ သငျစကားမြားလာတဲ့အခါ ကောငျးမှနျတဲ့ အကွံလေးတှပေေးမယျ့သူ ပိုငျဆိုငျထားတယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ ကံကောငျးတဲ့သူတယောကျဖွဈနပေါပွီ။
Photo : Vindeseal(Instagram)
အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ပြန်ပြီးတော့ နိုးထလာနိုင်ဖို့ ဟာသတွေပြောပေးနေလိမ့်မယ်။ အားပေးစကားတွေပြောနေမယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်း သူရဲ့ချစ်သူပိုပြီးစိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာအောင် တခုခုလုပ်ပေးမယ့် သူတွေကလည်း ဘ၀လက်တွဲဖော်အစစ်အမှန်တွေပါဘဲ။
အရမျးစိတျဓာတျကနြတေဲ့အခြိနျတှမှော ပွနျပွီးတော့ နိုးထလာနိုငျဖို့ ဟာသတှပွေောပေးနလေိမျ့မယျ။ အားပေးစကားတှပွေောနမေယျ။ဒါမှမဟုတျလညျး သူရဲ့ခဈြသူပိုပွီးစိတျဓာတျတကျကွှလာအောငျ တခုခုလုပျပေးမယျ့ သူတှကေလညျး ဘဝလကျတှဲဖျောအစဈအမှနျတှပေါဘဲ။
(၇) ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရမလည်းဆိုတာ သူကောင်းကောင်းသိတယ်။
Photo : Eminem(Instagram)
ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာတက်လာတိုင်းအော်ဟစ်ဆူပူမနေဘဲ ဘယ်လိုဘယ်ပုံဖြေရှင်းရင် အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ကို သူကောင်းကောင်းသိပါတယ်။
ပွဿနာတဈစုံတဈရာတကျလာတိုငျးအျောဟဈဆူပူမနဘေဲ ဘယျလိုဘယျပုံဖွရှေငျးရငျအဆငျပွသှေားနိုငျတယျဆိုတာ ကို သူကောငျးကောငျးသိပါတယျ။
(၈) အပြင်ရောက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတောင် သင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုသူလုံးဝမမေ့ပါဖူး။
Photo : jlo(Instagram)
ယောက်ကျားတွေက အချိန်တချိန်ထဲမှာခက်ခဲတဲ့ပုစ္ဆာတွေကို အာရုံမစိုက်နိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်ချစ်တက် တဲ့ လူကတော့ ချစ်သူမိန်းကလေးရဲ့ပြဿနာတွေကို သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို အမြဲတမ်းရှေ့ တန်းတင်ဖြေရှင်းပေးပါတယ်။
ယောကျကြားတှကေ အခြိနျတခြိနျထဲမှာခကျခဲတဲ့ပုစ်ဆာတှကေို အာရုံမစိုကျနိုငျကွပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ တကယျခဈြတကျ တဲ့ လူကတော့ ခဈြသူမိနျးကလေးရဲ့ပွဿနာတှကေို သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျပစ်စညျးလို အမွဲတမျးရှေ့ တနျးတငျဖွရှေငျးပေးပါတယျ။
Photo : jensenackles(Instagram)
ချစ်သူ၊လင်မယားစုံတွဲတွေဆို ချစ်ရည်လူးနေယုံနဲ့မပြီးပါဘူး။တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သူငယ်ချင်းတွေလို အကြံပေးနိုင်တဲ့သူတွေလိုလည်းနေထိုင်ရပါတယ်။ အဲ့တာမှလည်း တစ်ယောက်အခက်အခဲကို တစ်ယောက်က နားလည်ပြီးဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခဈြသူ၊လငျမယားစုံတှဲတှဆေို ခဈြရညျလူးနယေုံနဲ့မပွီးပါဘူး။တဈယောကျကိုတဈယောကျ သူငယျခငျြးတှလေို အကွံပေးနိုငျတဲ့သူတှလေိုလညျးနထေိုငျရပါတယျ။ အဲ့တာမှလညျး တဈယောကျအခကျအခဲကို တဈယောကျက နားလညျပွီးဖွရှေငျးပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Photo : rentvkrd(Instagram)
တကယ်လို့များ သင့်ရဲ့ချစ်သူ၊ခင်ပွန်းက သင့်ကိုတကယ်လေးစားတယ်ဆိုရင် သင့်ကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အသုံးပြုဖို့ရှာထားတဲ့သူလိုဘယ်တော့မှမတွေးပါဘူး။ သင် အလုပ်တွေပင်ပန်းတာကိုသူနားလည်ပြီး ဘယ်လိုကူညီရမလည်းဆိုတာကိုဘဲ သူအမြဲတမ်း စဉ်းစားနေတာဘဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လည်းချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် အကောင်းဆုံးသော ပျော်ရွှင်ကြည်နှုးစရာအချိန်ကလည်း နှစ်ယောက်အတူတူ ထမင်းဟင်းချက်စားကြတဲ့ အချိန်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယျလို့မြား သငျ့ရဲ့ခဈြသူ၊ခငျပှနျးက သငျ့ကိုတကယျလေးစားတယျဆိုရငျ သငျ့ကို ကိုယျရေးကိုယျတာ အသုံးပွုဖို့ရှာထားတဲ့သူလိုဘယျတော့မှမတှေးပါဘူး။ သငျ အလုပျတှပေငျပနျးတာကိုသူနားလညျပွီး ဘယျလိုကူညီရမလညျးဆိုတာကိုဘဲ သူအမွဲတမျး စဉျးစားနတောဘဲဖွဈတယျ။ပွီးတော့လညျးခဈြသူစုံတှဲတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးသော ပြျောရှငျကွညျနှုးစရာအခြိနျကလညျး နှဈယောကျအတူတူ ထမငျးဟငျးခကျြစားကွတဲ့ အခြိနျဘဲဖွဈပါတယျ။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ကတော့ လူတိုင်းလူတိုင်းက သာယာဖြောင့်ဖြူးတဲ့ မိသားစုဘ၀ကိုလိုချင်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုဘ၀ရနိုင်ဖို့ကိုလည်း စံပြထိုက်တဲ့ ယောက်ကျား၊မိန်းမ တွေကို ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေတက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ရွေးသင့်တာကတော့ သင်ရဲ့စိတ်ထဲ ဘယ်သူ့ကို ပထမနေရာထားမလည်း? ဘယ်သူကသင့်ကိုပထမနေရာထားမလည်း? ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘ၀ကို ရရှိဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသော့ချက်ဘဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။
နိဂုံးခြုပျအနနေဲ့ကတော့ လူတိုငျးလူတိုငျးက သာယာဖွောငျ့ဖွူးတဲ့ မိသားစုဘဝကိုလိုခငျြကွပါတယျ။ အဲ့လိုဘဝရနိုငျဖို့ကိုလညျး စံပွထိုကျတဲ့ ယောကျကြား၊မိနျးမ တှကေို ကိုယျ့ရဲ့စိတျကွိုကျရှာဖှတေကျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျရှေးသငျ့တာကတော့ သငျရဲ့စိတျထဲ ဘယျသူ့ကို ပထမနရောထားမလညျး? ဘယျသူကသငျ့ကိုပထမနရောထားမလညျး? ဆိုတဲ့အခကျြကတော့ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုဘဝကို ရရှိဖို့အတှကျအကောငျးဆုံးသော့ခကျြဘဲဖွဈပါတယျဆိုတာအကွံပွုလိုကျရပါတယျ။